galuumsota, muudanoota fi sarjaawwan
galuumsota, muudanoota fi sarjaawwan qindeessi
Galuumsota fi mudanoota keewwata ammee, ykn keewwatoota filaman mara, hantuuteen fayyadamanii ibsuu dandeessa.
Yoo fuula sarjaawwanitti murte, ykn qareen goodayyaa barruu sarjaa baay'ee qabata, yabbina sarjaa fi eddoo sarjaa sarartuurraa hantuuteen harkisuun jijjiiruu dandeenya
Weyta wanta, calaqqee, ykn wanti fakkaasamu filame, daangaalee wanta sarartuu keessaa ilaaluu dandeessa. Daangaalee sarartuurraa hantuuten harkisuun jijjiiruu dandessa.
Yoo qareen man'ee gabatee keessa qabate, Galuumsota qabeentota man'ee safartuu hantuuteerraa harkisuun jijjiiruu dandeenya. Sararota daangaa gabatee sarartuurraa ykn sarara daangaa dhugaa harkisuun jijjiiruu dandeenya.
Sajoon kun galuumsa bitaa sarara jalqaba keewwata ammee ( tiraangilii irraa) akkasumas galuumsa bitaa sarara keewwata biroo ( tiraangilii jalaa) mallatteessa.
Sajoon mirga sarartuu kun galuumsa mirgaa keewwata ammee mallatteessa.
Galuumsa bitaa qindeessi
Weyta qabduu hantuutee gadqabdu mallattoo jala bitaa gara mirgaa harkisi
Galuumsa bitaa sarara jalqabaa qindeessi
Weyta qabduu hantuutee gadqabdu mallattoo gubbaa bitaa gara mirgaa harkisi
Galuumsa mirgaa qindeessi
Weyta qabduu hantuutee gadqabdu mallattoo mirgaa gara bitaa harkisi
Weyta keewwata galuumsinu cancalloonni qindaa'e hin jijjiiramu. Yoo cancaloonni keewwata mudanoota alaa xumuru qindeessa, turanii hin mul'atan, garuu hanga ammaa jiraata.
Title is: galuumsota, muudanoota fi sarjaawwan